केपीले गरेको निर्णय मैले मान्दैन । अब एमाले कसरी अगाडि बढ्छ ? : वामदेव गौतम (अन्तर्वार्ता) – Khabar Patrika Np
केपीले गरेको निर्णय मैले मान्दैन । अब एमाले कसरी अगाडि बढ्छ ? : वामदेव गौतम (अन्तर्वार्ता)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण २८, २०७७ समय: २३:०८:४७
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका केन्द्रीय कमिटी सदस्यको मात्रै बैठकबाट पार्टीको दशौं महाधिवेशन तोक्नेदेखि निर्वाचित पदाधिकारीको जिम्मेवारी खोस्नेसम्मको निर्णय लिएपछि यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले माओवादी छोडेका नेताहरूलाई एमालेमा समाहित गर्ने तथा जिम्मेवारी दिने निर्णयका साथै माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका निर्वाचित पदाधिकारीको जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय गरेको हो ।
अध्यक्ष ओलीको यो निर्णय र नेकपा एमालेको आगामी बाटो के हुने भन्नेबारे नवौं महाधिवशेनबाट एमालेको उपाध्यक्षमा निर्वाचित वामदेव गौतमसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीः
एमाले पार्टीमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले लिएका निर्णयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षले गर्नै नसक्ने, गर्नै नहुने काम हो । यसलाई मैले चरम अराजकताको नमूना ठान्छु ।
तपाईं नेकपा नै एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो तर अहिले त एमालेमै यो तहको विवाद आयो है ?
यस्तो भइसकेपछि केपी ओलीसित कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त पनि रहेन । नीति पनि रहेन । जनताको बहुदलीय जनवादको त नाम पनि रहेन । जबज त देखाउनको निम्ती मात्रै रहेछ । यो कम्युनिस्ट नेताहरू पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीप्रति घोर अपमान र ठूलो घात हो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी भन्न पनि सक्नुहुन्न र आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भन्न पनि सुहाउँदैन । यसरी ठाडै सिद्धान्त परित्याग गर्ने काम त अराजकता र शक्तिको दुरुपयोग भन्दा अरु केही पनि हुन सक्दैन ।
यो परिस्थिति कसरी आएको हो ?
केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको शक्ति/पदको चरम दुरुपयोग गर्ने योजना बनाउनुभएको छ । त्यसैको आधारमा जे पनि गर्नसक्छु, मैले जे गर्छु त्यही सिद्धान्त हुन्छ, जे गर्छु त्यही संविधान बन्छ र जसो गर्छु त्यही कानुन बन्छ भन्ने उहाँलाई परेको छ । यो मध्ययुगीन सामन्तवादको अवस्था हो जहाँ राजाले जे बोल्यो त्यै कानुन हुन्थ्यो । अहिले केपी ओलीले जे बोल्यो त्यै कानुन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
ओलीको यो कदमलाई कसरी ‘ट्याकल’ गर्नुहुन्छ ?
यसलाई ट्याकल किन गर्नुपर्‍यो ? जनतालाई, कम्युनिस्ट पार्टीमा विश्वास गर्ने सदस्यहरूलाई हो नि ट्याकल गर्ने । हामी पनि त्यसैमा सामेल हुने हो । केपी ‌ओलीलाई ट्याकल गर्ने त कुरै भएन अब । केपी ओलीको पछाडि लाग्ने कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन् । केपी ओलीलाई त कसरी कम्युनिस्ट भन्ने ? उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्तबाट च्युत हुनुभयो ।
एमालेको दशौं महाधिवेशन मिति तोकिएको छ, त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
उहाँले महाधिवेशन मात्रै होइन महा… महा… महाअधिवशेन गर्नुभएछ भने पनि त्यो हुँदैन । त्यो केपी ओलीको अराजकताको घोषणाबाहेक केही पनि हुँदैन त्यो ।
त्यसोभए अध्यक्ष ओलीसँगको बाटो अलग्गियो ?
हो । केपी ‌ओलीसँगको एकता त समाप्तै भयो । अब हामीले अरु पार्टीहरूको बीचमा एकताको प्रयास गर्छौं ।
सत्ताको दुरुपयोग केलाई भन्नुभएको हो ?
ओलीले सत्ताको दुरुपयोग त गर्नुभएकै छ । सत्ताको दुरुपयोग गर्ने अवसरलाई प्रयोग गरेर मैले जे गर्छु त्यो गराएरै छोड्छु भन्ने त्यस्तो दुर्विचार बोकेर हिँड्नुभएको छ ।
अब त पार्टी सत्ता पनि कब्जा गर्नुभयो हैन ?
उहाँको गुटको सत्ता बन्यो । पार्टी सत्ता त के को कब्जा गर्ने हो ? उहाँको गुटमा आँखा चिम्लेर लाग्ने जति छन् ती केपीतिरै लाग्छन् । हो तिनीहरूको सत्ता कब्जा गरेको हो । के को हाम्रो पार्टीको सत्ता कब्जा हुन्छ ?
तपाईंको त उपाध्यक्ष पद नै खारेज भइहाल्यो नि ?
त्यो भइहाल्यो नभन्नुस् न ! केपीलाई कसले मान्छ र जाने, ल्याउने हो ? केपीलाई मैले मान्दैन नि त। केपीले गरेको निर्णय मैले मान्दैन ।
अब एमाले कसरी अगाडि बढ्छ ?
उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनको बाटो छोड्नुभएको छ । उहाँ प्रधानमन्त्रीको पद सर्वशक्तिशाली छ, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ । त्यलाई नेकपा एमालेका इमानदार नेता र कार्यकर्ता, सदस्यहरूले मान्नुहुन्न ।